I-Canada iya kuphakamisa i-Age Elifanelekayo yoKhuseleko lwabantu abadala
Kuhlahlo lwabiwo-mali luka-2012, urhulumente waseburhulumenteni waseCanada wamemezela ngokutsha utshintsho olucwangciselwe umhlala-phantsi we-Old Age Security (OAS). Utshintsho olukhulu luya kuphakamisa ixesha lokufaneleka kwi-OAS kunye ne-Supplementary Revenue Supplement (GIS) ukusuka kwi-65 ukuya ku-67, ukususela ngo-Ephreli 1, 2023.
Utshintsho kwiminyaka yokufaneleka luya kuhlonywa ngokukhawuleza ukusuka ngo-2023 ukuya ku-2029. Utshintsho aluyi kukuchaphazela ukuba ngoku ufumana i-OAS.
Utshintsho kulungelo lwe-OAS kunye neenzuzo ze-GIS aluyi kuchaphazela nabani na ozelwe ngo-Ephreli 1, 1958.
Urhulumente uya kuzisa nokukhetha abantu ngabanye ukuba bangayifumani ipenshini yabo ye-OAS iminyaka engamahlanu. Ngokufakela ipensheni yakhe ye-OAS, umntu uya kufumana umhlala-phantsi ophezulu kunyaka ukususela kunyaka ozayo.
Kwimizamo yokuphucula iinkonzo, urhulumente uya kuqalisa ukubhaliswa okusebenzayo kwi-OAS kunye ne-GIS kubantu abadala abafanelekileyo. Oku kuya kuqalwa ukususela ngo-2013 ukuya ku-2016 kwaye kufuneka uthethe ukuba abadala abafanelekileyo abayi kufuna ukulungiselela isicelo se-OAS kunye ne-GIS njengoko benzayo ngoku.
I-Canada-Old Age Security (OAS) yinkqubo enye ebalulekileyo kwi-federal government. Ngokwe-Budget ka-2012, inkqubo ye-OAS inikezela malunga nama-dollar ayi-38 yezigidi ngonyaka kwiingenelo kubantu abayizigidi ezingama-4.9. Ngoku ixhaswa ngemali evela kwingxowa-mali jikelele, nangona kwiminyaka emininzi kwakukho into efana ne-OAS yeNtela.
Inkqubo yaseKhanada yeNdala yeKhuseleko (i-OAS) yinkqubo ekhuselekileyo yokukhusela abantu abadala. Inika intlawulo yenyanga yenyameko kubantu abadala abadala abaneminyaka engama-65 ubudala nangaphezulu abahlangabezana neemfuno zokuhlala zaseCanada. Imbali yengqesho kunye nemo yomhlala-phantsi ayikho imeko kwiimfuno zokufaneleka.
Abantu abadala abafumana ingeniso ephantsi banokufumana izibonelelo zee-OAS ezongezelelweyo kubandakanya iSongezelelo seNgeniso esiQinisekisiweyo (GIS), iSibonelelo kunye neSibonelelo soMsindisi.
Umhlala-phantsi we-OAS oyisiseko esiphambili wonyaka njengama-6,481. Iinzuzo zikhokhelwe kwiindleko zokuphila ezilinganiswe yiNkcazelo yeNtengo yabathengi. Iintlawulo ze-OAS zihlawulwa ngumbuso wephondo kunye noorhulumente.
Ingeniso ye-GIS yonyaka ngoku i-$ 8,788 njengamanani asebekhulile kunye ne-$ 11,654 yezibini. I-GIS ayihlawulwanga, nangona kufuneka uyixele xa ufaka irhafu yakho yeRhafu yaseKhanada .
I-OAS ayifumanekanga. Kumele ufake isicelo se-OAS , kwakunye neenzuzo ezizeleyo.
Kutheni i-OAS iguqula?
Kukho izizathu ezininzi ezibalulekileyo zenguqu ezenziwe kwiprogram ye-OAS.
Abantu baseKhanada abantu abaguga: Amanani abantu ashintsha. Ukulinda kwexesha lokuphila kukhula, kwaye iqela leminyaka yabantwana boomers (abo bazalwa phakathi kowe-1946 no-1964) lukhulu. Urhulumente uqikelela ukuba inani labantu abadala baseCanada liza kuphinda liphindwe kabini ukusuka ngo-2011 ukuya ku-2030, ukusuka kwizigidi ezi-5 ukuya kwi-9.4 yezigidi. Oku kubeka uxinzelelo olukhulu kwiinkqubo ze-OAS, ngokukodwa xa inani labadala baseKhanadi abasebenzayo (abaza kubakhokhela irhafu) ngamnye kulindeleke ukuba bayeke ukusuka kwi-ezine ukuya kweyesibini kwixesha elifanayo.
Iindleko: Uhlahlo lwabiwo-mali luka-2012 luqikelela ukuba iindleko ze-OAS ngaphandle kokuba utshintsho luya kuvela kwi-38 biliyoni ngo-2011 ukuya kwi-$ 108 yezigidigidi ngo-2030. Oko kuthetha ukuba ama-13 engama-dollar yerhafu esetshenzisiweyo kwiintlawulo ze-OAS namhlanje aya kuba ngama-21 eentlawulo nganye idola efunekayo kwinkqubo ngo-2030-31.
Ukunyaniseka: Ukuvumela abadala ukuba bakhethe ukuchasisa ukuthatha ipensheni yabo ye-OAS iya kubanika ukhetho oluthe xaxa ukwenza izigqibo ezifanelekileyo kwiimeko zabo.
Ukusebenza kakuhle: Ukubhaliswa kwabasebenzi abadala kwiinkqubo ze-OAS kunye ne-GIS kungekuphela nje ukunciphisa umthwalo ongeyomfuneko kubantu abadala, kunye nokutshintshwa kwexesha elide elingagqithisiyo lokugcina iindleko zenkqubo kaRhulumente.
Ixesha le-OAS litshintsha lenze ntoni?
Nazi iifom zexesha lokutshintshwa kwi-OAS:
Ukwandisa Ubudala obufanelekayo kwi-OAS kunye neeNzuzo ezongezelelweyo: Ezi nguqu ziqala ngo-Ephreli 2023 kwaye ziyaqalwa kwiminyaka engaphezu kweyesithandathu ukuya kuJanuwari 2029. Ezi tshintshi zeenguqu ze-OAS zibonisa iminyaka ngekota.
Ukuchithwa ngokuzithandela kwe-OAS Pension: Ukuchithwa ngokuzithandela kwenkqubo ye-OAS ukuya kwiminyaka emihlanu iqala ngoJulayi 2013.
UkuBhaliswa okuPhezulu kwi-OAS kunye ne-GIS: Oku kuya kuqalwa ukususela ngo-2013 kuya ku-2016. Abo bafanelekileyo baya kwaziswa ngokwabo ngeposi. Abo bangakufanelekanga baya kuthunyelwa izicelo okanye bangathatha izicelo ezivela kwiNkonzo yeCanada. Kufuneka ufake isicelo se-OAS ubuncinane kwiinyanga ezintandathu ngaphambi kokuba uguqule iminyaka engama-65. Kuya kuba nolwazi oluninzi ngale ndlela ekhoyo evela kwi-Service Canada njengoko iphuhlisiwe.
Imibuzo Ngokukhuseleko Lokudala
Ukuba unemibuzo malunga neNkqubo yoLondolozo lweNdala, ndincoma
Hlola ulwazi malunga nomhlalaphantsi we-Old Age Security kwindawo ye-Service Canada
Funda Imibuzo Ebuzwa Ngokuphindaphindiweyo malunga ne-OAS kwi-Service Canada site. Ulwazi lwabo loqhagamshelwano lukwiphepha.